(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်နယ်ရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
4 times benefit for4months mm
“၄ လဆို ၄ဆနော်” ပရိုမိုးရှင်း MPT Pay နဲ့ လစဉ် ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဘေလ်ပေးချေ၊ ၅၄၅၀ ကျပ်အထိ ပြန်အမ်းငွေတွေရယူလေ။ ၂၀၂၂ မတ်လအထိ ရမှာနော်။ E-money ပြန်အမ်းငွေ ပရိုမိုးရှင်း ကာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်နည်း!၁။ MPT Pay သုံးစွဲသူ မဖြစ်သေးပါက အခုပဲ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။ How to register MPT Pay ၂။ MPT Pay သုံးစွဲသူ ဖြစ်ပြီး Wallet ထဲတွင် ငွေမရှိပါက ငွေသွင်းနည်းကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ။MPUVISAKBZ BankAYA BankCB BankUABMPUMPU Cash-in User Manual MPU … Continue reading "4 times benefit for4months mm"
MPT သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း
ချင်းပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု အခက်အခဲကို ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို နဂိုအတိုင်း သုံးစွဲနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက်လည်း အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
MPT သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့မှ မြင်းမူမြို့နှင့် မကွေးတိုင်း ရေစကြိုမြို့တို့ အကြားတွင် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း ပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ နေရာအချို့တွင် တယ်လီကွန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု အခက်အခဲအချို့ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အနေဖြင့် နဂိုအတိုင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုများကို အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အဆင်မပြေမှုများအတွက် အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်စနစ် (Copper Cable Network) အား မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သည့်
“Binge Watch and Win the Prize” Campaign Frequently Asked Questions mm
MPT နှင့် Viu တို့မှ ပြုလုပ်သည့် “ဆက်တိုက်ကြည့်ပြီး ဆုတွေယူ” အစီအစဉ် မေးလေ့ မေးထရှိသည့် မေးခွန်းများ၁။ ‘‘ဆက်တိုက်ကြည့်ပြီး ဆုတွေယူ’’ အစီအစဉ် ဆိုတာ ဘာလဲ။‘‘ဆက်တိုက်ကြည့်ပြီး ဆုတွေယူ’’ အစီအစဉ် သည် MPT အသုံးပြုသူများအတွက် Viu နှင့် MPT တို့မှ ပြုလုပ်ပေးသော အစီအစဉ်ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကံထူးနိုင်မည့်သူများအနေဖြင့် Viu မှ ဇာတ်ကားများကြည့်ရှုနိုင်သည့် အများဆုံး MPT ဒေတာ 1GB အထိ(Viu App အတွက်သာ) ဆုလက်ဆောင်များ အပြင် တခြားဆုလက်ဆောင်များကိုပါ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂။‘‘ဆက်တိုက်ကြည့်ပြီး ဆုတွေယူ’’ အစီအစဉ် ကာလ ဘယ်လောက်ကြာမြင့်မှာလဲ။‘‘ဆက်တိုက်ကြည့်ပြီး ဆုတွေယူ’’ အစီအစဉ် ကို ၂၀၂၁ နို၀င်ဘာလ ၁၁ရက် မှ ၂၀၂၁ … Continue reading "“Binge Watch and Win the Prize” Campaign Frequently Asked Questions mm"
Binge Watch and Win the Prize mm
MPT စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - Binge Watch and Win the Prize ဤစာမျက်နှာသည် ‘‘ဆက်တိုက်ကြည့်ပြီး ဆုတွေယူ” (“ပ႐ိုမိုးရွင္း”) တွင် ပါဝင်ရာ၌ လူကြီးမင်း လိုက်နာရန် သဘောတူရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းကို မြန်မာ့ ဆက်သွယ် ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”, “ကျွနု်ပ်တို့”, “ကျွနု်ပ်တို့ကို”, “ကျွနု်ပ်တို့၏”) ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ မှတဆင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ဤစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ် သည့် အခြားသောသက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများ နှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟု ခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှု၊ နားလည်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူကြောင်း … Continue reading "Binge Watch and Win the Prize mm"
COVID-19 စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုအတွက် အသိပေးခြင်း
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်)- မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်း (၂)ဦး တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း MPT က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရသည့်ဖြစ်ရပ်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရုံးများအတွင်း ဆေးဖြန်းခြင်း နှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သော ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များကိုလျင်လျင်မြန်မြန်ထိထိရောက်ရောက်
1) When you experience slow internet or disconnection? 2) How to change username and password ? (Huawei ONU) 3) How to change username and password ? (ZTE ONU) Trouble Shooting page Huawei ONU ZTE ONU MPT ၏ အိမ်သုံးအင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု FTTH အခက်ခဲများ ဖြေရှင်းခြင်း လမ်းညွှန် လူကြီးမင်း ၏ အင်တာနက် (သို့) လိုင်းဆွဲအားနှေးနေပါက ပထမဦးစွာ အောက်ပါနည်းလမ်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ STEP-1 ပါဝါ အချက်ပြမီးကို စစ်ဆေးပါ။ Router … Continue reading "FTTH General Trouble Shooting"
IP Transit mm
IP Transit MPT Secured IP Transit ဝန်ဆောင်မှုသည် ပင်လယ်ကြိုးကေဘယ်ဆက်ကြောင်းနှစ်ခု နှင့်လည်းကောင်း၊ အခြား မြေပြင်ဆက်ကြောင်း များဖြင့် လည်းကောင်း သင့်လုပ်ငန်းကို အထူးပံပိုးကူညီထားပါသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများ IP ပေါင်း 20 ပါသည့် 10 AS နံပါတ်များ စိတ်ချရသည့် BGP လမ်းကြောင်း Bandwidth များကို 100 Mb/s မှစ၍ သုံးစွဲသူများလိုအပ်ချက်အထိ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ multiple content providers အချင်းချင်းလွယ်ကူစွာဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း SLA 99.9% လုံခြုံစိတ်ချရသော IXPs များ တည်ငြိမ်သည့် Latency 24/7 customer service Country wide coverage Dedicated and private connectivity Multiple … Continue reading "IP Transit mm"